Breaking news : घरको छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजन ! – Life Nepali
Breaking news : घरको छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजन !
Breaking news : घरको छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजन ! झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा अब कोही पनि नागरिकले फुसको छानोमा बस्नु नपर्ने भएको छ । सबै विपन्न नागरिकका लागि सरकारले खरको छानो हटाउँदै जस्ता पाताको छानो लगाइदिन शुर गरेसँगै झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने चार पालिकामा फुसको छानो परिवर्तन हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले रु एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटले सबै विपन्न नागरिकको घर निर्माण गरिने छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous Breaking : सोच्नै नसक्ने गरि ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य !
Next OMG नेपालमा आज एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित देखिए !